စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့ ပလက်ဝမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူတွေ့လို့ စိုးရိမ်နေကြ
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ပထမဆုံး ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်သူ အတည်ပြုလူနာတချို့ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် စိုးရိမ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အထဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေက ဒုက္ခသည်တွေလည်း ပါဝင်နေတဲ့အကြောင်း အေဂ္ဂနွန် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေ တိုးလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်အတွက် ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေ သတိပေးနေချိန်မှာပဲ ချင်းပြည်နယ်မှာ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ပထမဆုံး ကူးစက်သူ ၄ ယောက်ကို အတည်ပြုလိုက်တာပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံနေရကြောင်း မနေ့တုန်းကပဲ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ လူနာဟာ ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု အများဆုံး ကြုံနေရတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းက ပြန်ရောက်လာသူ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပလက်ဝမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာစိုးသက်ဝင်းကပြောပါတယ်။
“သူတို့က စုစုပေါင်း ၇ ယောက်ပြန်လာတယ်ဗျ၊ ၇ ယောက်ပြန်လာတာ ၇ ယောက်လုံးကိုစစ်တာမှာ အဲဒီ လေးယောက် positive ဖြစ်တာပေါ့နော်၊ ဟုတ်တယ်။ ပထမဆုံး ဟုတ်။ guideline အရ စစ်လိုက်လို့တော့ positive တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်၊ လက္ခဏာရှိလို့ စစ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။”
ကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူတွေကိုလည်း အသွားအလာကန့်သတ်ပြီး ရောဂါရှိမရှိ စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ဒေါက်တာစိုးသက်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နိမ့်ကျပြီး လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုဗစ်ကူးစက်သူ အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ရောဂါကူးစက်မှု အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေ အများအပြားကြားမှာလည်း ရောဂါကူးစက်မှာ စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ မြို့ခံတွေ သာမက ဒုက္ခသည်တွေ ကြားမှာပါ ရောဂါကူးစက်မယ့် အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်နေကြတာလို့လည်း ပလက်ဝမြို့မှာ ခိုလှုံနေတဲ့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် ဦးတင်ဦး က ပြောပါတယ်။
“ဒီမြို့သူမြို့သားအပါအဝင် ကျနော်တို့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကလည်း နည်းနည်းထိပ်လန့်ချင်ကြတာပေါ့၊ ဒီရောဂါဘယ်လိုမြင်လာမလဲ တအားကြီးစိုးရိမ်းတာပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့စိုးရိမ်တာလဲ ဒီဘက်မှာက တကယ်လို့များဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် မလွယ်ဘူးလို့။ ကျနော်တို့က စစ်ရှောင်စခန်းမှာ နေတယ်ဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့က ၆ ပေ လုံးလုံးမခွာနိုင်ဘူးလေး။”
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းပြီး စုပြုံနေထိုင်နေကြရတဲ့အတွက် ရောဂါကူးစက်မှာကို စိုးရိမ်နေရတာလို့လည်း အကူအညီပေးနေသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“သုံးပေအကွာတော့ ရှိတာပေါ့နော်၊ ယာယီတဲဆောင် ကျနော်တို့ ဆောက်ထားတာတွေကတော့ သုံးပေအကွာလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီမှာ တစ်စုတစ်စည်းနေတာ ချက်ပြုတ်တာ ဘာညာဆိုရင်လည်း တစ်နေရာထဲမှာ စုပြီးချက်ရတာကို အဲ့တော့ နည်းနည်းလေး ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ ဖြစ်ရင် အကုန်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်၊ ကူးစက်လွယ်ကူးတာပေါ့နော်၊ အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့။”
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ခိုလှုံနေကြသူ ၁ သောင်းကျော် ရှိနေတယ်လို့လည်း ဒေသခံအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ခူမီးချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပလက်ဝမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်လောဟာကတော့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေး အစီအမံတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ထားတယ်လို့. ပြောပါတယ်။
“တိုက်ပွဲရှောင်တွေ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ ကျနော်တို့ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်၊ IDP camps စခန်းအလိုက် သူတိုိ့ကိုခေါ်ပြီးမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို အပြင်မထွက်ဖို့နော် အပြင်ထွက်ရင်လည်းပဲ အမြဲတမ်းလက်ဆေးဖို့ ပြီးရင် Mask တပ်ဆင်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ဖို့ ပြန်ရောက်ရင်လည်းပဲ လက်ဆေးပြီးမှ အိမ်ထဲပြန်ဝင်ဖို့ အဓိကတော့ မလိုအပ်ဘဲ အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ ဆေးသွားကုရင်လည်းပဲ တစ်အိမ်ကိုတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ မဖြစ်မနေသွားရရင် သွားဖို့ အဲ့ဒါ အကုန်လုံး ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်နဲ့အညီ နေထိုင်ဖို့ မှာကြားပြီးပါပြီခင်ဗျ။”
မြန်မာနိုင်ငံအ၀န်း နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေ တိုးလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို သတိထားဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း သတိပေးထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁,၆၀၀ ကျော်နဲ့ ကူးစက်သူအတည်ပြုလူနာ ၇၄၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျမှာ ပထမဆုံး ကိုဗဈရောဂါပိုး ကူးစကျသူ အတညျပွုလူနာတခြို့ တှရှေိ့ခဲ့ပွီးနောကျ စိုးရိမျမှုတှေ ထှကျပျေါလာနတေဲ့အထဲ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုအားနညျးတဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှကေ ဒုက်ခသညျတှလေညျး ပါဝငျနတေဲ့အကွောငျး အဂ်ေဂနှနျ သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံအနှံ့ ကိုဗဈကပျရောဂါကူးစကျမှုတှေ တိုးလာနိုငျတဲ့ အန်တရာယျအတှကျ ကနျြးမာရေးတာဝနျရှိသူတှေ သတိပေးနခြေိနျမှာပဲ ခငျြးပွညျနယျမှာ ပလကျဝမွို့နယျမှာ ပထမဆုံး ကူးစကျသူ ၄ ယောကျကို အတညျပွုလိုကျတာပါ။ ရောဂါကူးစကျခံနရေကွောငျး မနတေု့နျးကပဲ အတညျပွုလိုကျတဲ့ လူနာဟာ ကပျရောဂါကူးစကျမှု အမြားဆုံး ကွုံနရေတဲ့ ရနျကုနျတိုငျးက ပွနျရောကျလာသူ ဖွဈတယျလို့လညျး ပလကျဝမွို့နယျကနျြးမာရေးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါကျတာစိုးသကျဝငျးကပွောပါတယျ။
“သူတို့က စုစုပေါငျး ၇ ယောကျပွနျလာတယျဗြ၊ ၇ ယောကျပွနျလာတာ ၇ ယောကျလုံးကိုစဈတာမှာ အဲဒီ လေးယောကျ positive ဖွဈတာပေါ့နျော၊ ဟုတျတယျ။ ပထမဆုံး ဟုတျ။ guideline အရ စဈလိုကျလို့တော့ positive တှရေ့တယျပေါ့နျော၊ လက်ခဏာရှိလို့ စဈတာမဟုတျဘူးခငျဗြ။”
ကူးစကျမှု အတညျပွုလူနာနဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံခဲ့သူတှကေိုလညျး အသှားအလာကနျ့သတျပွီး ရောဂါရှိမရှိ စဈဆေးသှားမယျလို့ ဒေါကျတာစိုးသကျဝငျးက ပွောပါတယျ။
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု နိမျ့ကပြွီး လမျးပမျးဆကျသှယျရေး ခကျခဲတဲ့ ခငျြးပွညျနယျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကိုဗဈကူးစကျသူ အတညျပွုခဲ့ပွီးနောကျ ရောဂါကူးစကျမှု အန်တရာယျကို စိုးရိမျမှုတှလေညျး ထှကျပျေါလာပါတယျ။ AA ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့နဲ့ တပျမတျောကွား တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ တိမျးရှောငျနရေတဲ့ စဈရှောငျဒုက်ခသညျတှေ အမြားအပွားကွားမှာလညျး ရောဂါကူးစကျမှာ စိုးရိမျနကွေတာပါ။ မွို့ခံတှေ သာမက ဒုက်ခသညျတှေ ကွားမှာပါ ရောဂါကူးစကျမယျ့ အန်တရာယျကို စိုးရိမျနကွေတာလို့လညျး ပလကျဝမွို့မှာ ခိုလှုံနတေဲ့ စဈရှောငျဒုက်ခသညျ ဦးတငျဦး က ပွောပါတယျ။
“ဒီမွို့သူမွို့သားအပါအဝငျ ကနြျောတို့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှကေလညျး နညျးနညျးထိပျလနျ့ခငျြကွတာပေါ့၊ ဒီရောဂါဘယျလိုမွငျလာမလဲ တအားကွီးစိုးရိမျးတာပေါ့၊ ဘာဖွဈလို့စိုးရိမျတာလဲ ဒီဘကျမှာက တကယျလို့မြားဖွဈလာမယျဆိုရငျ မလှယျဘူးလို့။ ကနြျောတို့က စဈရှောငျစခနျးမှာ နတေယျဆိုပမေယျ့ ကနြျောတို့က ၆ ပေ လုံးလုံးမခှာနိုငျဘူးလေး။”
ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု အားနညျးပွီး စုပွုံနထေိုငျနကွေရတဲ့အတှကျ ရောဂါကူးစကျမှာကို စိုးရိမျနရေတာလို့လညျး အကူအညီပေးနသေူ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
“သုံးပအေကှာတော့ ရှိတာပေါ့နျော၊ ယာယီတဲဆောငျ ကနြျောတို့ ဆောကျထားတာတှကေတော့ သုံးပအေကှာလုပျထားတယျပေါ့နျော၊ ဒါပမေယျ့လညျး အဲ့ဒီမှာ တဈစုတဈစညျးနတော ခကျြပွုတျတာ ဘာညာဆိုရငျလညျး တဈနရောထဲမှာ စုပွီးခကျြရတာကို အဲ့တော့ နညျးနညျးလေး ဖွဈနိုငျခကြေတော့ ဖွဈရငျ အကုနျတော့မလှယျဘူးပေါ့နျော၊ ကူးစကျလှယျကူးတာပေါ့နျော၊ အဲ့လိုလေးတော့ဖွဈမှာပေါ့။”
လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခတှကွေောငျ့ ပလကျဝမွို့နယျမှာ ခိုလှုံနကွေသူ ၁ သောငျးကြျော ရှိနတေယျလို့လညျး ဒသေခံအကူအညီပေးရေး အဖှဲ့တခုဖွဈတဲ့ ခူမီးခငျြးမြိုးနှယျစုမြားရေးရာ ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးရေးကောငျစီက ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ပလကျဝမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူး ဦးအောငျလောဟာကတော့ စဈရှောငျဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော ရောဂါကူးစကျမှု ကာကှယျရေး အစီအမံတှနေဲ့ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးထောကျပံ့ထားတယျလို့. ပွောပါတယျ။
“တိုကျပှဲရှောငျတှေ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးကျောမတီ ကနြျောတို့ဖှဲ့ထားတာရှိတယျ၊ IDP camps စခနျးအလိုကျ သူတိုိ့ကိုချေါပွီးမှ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျတှကေို အပွငျမထှကျဖို့နျော အပွငျထှကျရငျလညျးပဲ အမွဲတမျးလကျဆေးဖို့ ပွီးရငျ Mask တပျဆငျပွီးမှ အပွငျထှကျဖို့ ပွနျရောကျရငျလညျးပဲ လကျဆေးပွီးမှ အိမျထဲပွနျဝငျဖို့ အဓိကတော့ မလိုအပျဘဲ အိမျပွငျမထှကျဖို့ ဆေးသှားကုရငျလညျးပဲ တဈအိမျကိုတဈယောကျနှုနျးနဲ့ မဖွဈမနသှေားရရငျ သှားဖို့ အဲ့ဒါ အကုနျလုံး ကိုဗဈစညျးကမျးခကျြနဲ့အညီ နထေိုငျဖို့ မှာကွားပွီးပါပွီခငျဗြ။”
မွနျမာနိုငျငံအဝနျး နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ ရှေးကောကျပှဲတှေ ကငျြးပခဲ့ရာမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံမှုတှေ ရှိခဲ့တာကွောငျ့ ကပျရောဂါကူးစကျမှုတှေ တိုးလာနိုငျတဲ့ အန်တရာယျကို သတိထားဖို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနနဲ့ အစိုးရတာဝနျရှိသူတှကေလညျး သတိပေးထားပါတယျ။ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ ဒီကနမှေ့နျးလှဲပိုငျးအထိ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၁,၆၀၀ ကြျောနဲ့ ကူးစကျသူအတညျပွုလူနာ ၇၄၀၀၀ ကြျော ရှိနပေါတယျ။
ပလက်ဝ တပ်ဧရိယာထဲ မျှစ်ရှာသွားသူတွေ မိုင်းထိပြီး ထိခိုက်သေဆုံး
ကိုဗစ်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် သွားလာမှုကန့်သတ်ခံထားရတဲ့ ပလက်ဝမှာ ရိက္ခာပြတ်